MIDNIMADA MAXAA LAGU GAARI KARAA?“Indhaha aad isku aragtaan cadaawaha iskaga eega” Abwaan Xaaji Aadan Af Qalooc,AUN. | Voice Of Somalia
Ummamka dunida ka jiraa xoogoodu wuxuu ku dhisanyahay midnimadoodu inta ay le’egtahay, sidaa daraadeed baa waxaa la yiraahdaa, midnimadu waa waxa ay ummaduhu ku gaaraan meesha sare ee sharafta leh. Waa waxa ay dantooda ku gaari karaan. Waa waxa keena iney bulsho noolaato iyadoo deggan oo xasiloon. Waa waxa keena ummadi ineey noqoto dad laga cabsado, la tixgaliyo ama la maamuuso. Midnimadu waa quwad, waxay ka mid tahay sunanta kowniga ah ee hadii la qaato lagu gaaro guusha, hadii la gudub marana lagu mutaysto in basharka loogu hoos maro. “يد الله مع الجماعه” (Eebbe wuxuu la jirankooda yahay jmaacada).
Midnimada aadamaha oo keliya horumar kuma gaaro ee xitaa cayayaanka ayaa markay midaysanyihiin oo ay wada shaqeeyaan u suurta gasha ineey sameeyaan wax markii caqliga aadamaha loo bandhigo la yaab ku noqda. Tusaale, shinnidu markay xoogeeda midayso oo ay wada shaqayso waata aad aragteen malabka ay samayso. Shaacirkii da’da yaraa ee Mohamed Muumin “Ababe” waa tii uu lahaa:
* caddowga oo hal dhana loogaga soo wada jeesto, innaan la noqon doqontii la yiri labo iyo toban indhood bay leedahay; kow iyo tonban indhood inta u xigta ayeey isaga eegtaa, il kaliyana caddowga ayey isaga eegtaa. Xaaji Aadan “Af Qalooc” (AUN) waa halkii uu ka yiri “Indhaha aad isku aragtaan cadaawaha iskaga eega”. Waa hubaal hadii intaa la inaga helo innaynu gaareyno halkaan hiigsanayno; Qof ahaan, Qoys ahaan, iyo Qaran ahaanba.
Markuu ururay daartuu abyeybaa la ashqaraaraaye
DHAGEYSO:-Siyaasi Xagaleey “Generaal Gabre Calanka Soomaaliya ayuu bedelay xilli uu hareer taagnaa Xasan Sheekh ”